Ohabolana Ampemby : antitra vao mitsiky vazana. [Veyrières 1913 #1799, Cousins 1871 #150]
Ohabolana Antitra manara am--pandriana: mivoady ny masoandro hiseho. [Veyrières 1913 #1803, Cousins 1871 #247]
Ohabolana Aza manao toy ny voavahy : tanora, manani-kazo ; antitra, vao mikorintsana. [Veyrières 1913 #1807, Cousins 1871 #528]
Ohabolana Ketsa va aho ka ho antitra iray taona? [Houlder 1895 #820, Cousins 1871 #1260]
Ohabolana Lamban' antitra : tsy ilana izay rendrarendrany intsony, fa ny mafy ihany no tsara. [Veyrières 1913 #1829, Cousins 1871]
Ohabolana Ny ditra maha-kely antitra. [Veyrières 1913 #6373, Cousins 1871]
Ohabolana Sifotra antitra, ka tsy mahangeza renivorona. [Cousins 1871 #2886]
Ohabolana Tanalahy manani-bero : antitra mijaiko, tanora mijaiko. [Veyrières 1913 #1711, Cousins 1871 #2993]
Ohabolana Toy ny fanoto: antitra vao kely anarana. [Houlder 1895 #1942, Cousins 1871 #3191]